scheduleशुक्रवारफाल्गुन २१ गते, २०७७
सिमकोट, १३ माघ । हिमाली जिल्ला हुम्लाका सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालय यही माघ १५ गतेबाट सञ्चालनमा आउने भएका छन् ।
तीनवटा गाउँपालिका रहेका हुम्लामा ७७ सामुदायिक तथा निजी विद्यालय रहेका छन् । तीमध्ये सिमकोटमा २८, सर्केगाडमा ३२ र ताँजाकोट गाउँपालिकामा १७ विद्यालय छन् । गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार कोरोना सङ्क्रमणको त्रास कम भएका कारण यहाँका सबै विद्यालय माघ १५ गतेबाट सुचारु हुन लागेका हुन ।
ताँजाकोट गाउँपालिकाका चार माध्यामिक र १३ आधारभूत विद्यालय गरी कूल १७ विद्यालयमा माघ १५ गतेबाट पठनपाठन शुरु हुने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद ढकालले बताए । गाउँ कार्यपालिकाले विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै गाउँपालिकाका कार्यालयले सबै विद्यालयलाई पठनपाठनको तयारी गर्न पत्राचार गरिसकेको उनले बताए । कोरोना सङ्क्रमण विरुद्धका सामग्री भने गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने भएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको त्रास कम भएको भन्दै सुरक्षा सावधानी अपनाएर गाउँपालिका शिक्षा समितिबाट निर्णय गरेर कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द रहेको सर्केगार्ड गाउँपालिकाका ३२ विद्यालयमा माघ १५ गतेबाट पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक आचार्यले बताए । अन्य सबै काम गर्न हुने तर विद्यालय बन्द गरिरहनु उपयुक्त नदेखिएको कारण पठनपाठन सुचारु गर्ने निर्णय भएको होे ।
यता सदरमुकामसमेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमा पनि यही माघ १५ गतेबाट पठनपाठन सुचारु हुने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाले जानकारी दिए । सिमकोट गाउँपालिका र विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीचको बैठकले अब पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोना सङ्क्रमण त्रास कम भएको र अन्यत्र सबैतिरका विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु भएको बेला सिमकोट गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको अविभावकको भनाइ छ ।
यो समय हुम्लाका विद्यालयमा हिँउदे बिदा हुने समय हो । तर यस वर्ष कोरोनाका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएदेखि नै पठनपाठन नभएको र हाल कोरोनाको त्रास कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी माघ १५ गतेबाट पठनपाठन सुचारु गर्ने निर्णय भएको हो ।
सिमकोट गाउँपालिकामा सामुदायिक र संस्थागत गरी २८ विद्यालय रहेका छन् । पठनपाठन सुचारु हुने विद्यालयलाई सेनिटाइटर र मास्कको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । गत साउन र कात्तिक महिनामा हुम्लाका विद्यालयमा पठनपाठन शुरु भएको भए पनि कोरोना सङ्क्रमित देखिएपछि बन्द भएका थिए । यसअघि पुस १५ बाट अदानचुली गाउँपालिकाका २१ विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु भइसकेको छ । अब नाम्खा, खार्पुनाथ, चङ्खेली र ताँजाकोट गाउँपालिकाका विद्यालयमा पठनपाठन हुन बाँकी छ । रासस
ऊर्जा कम्पनीहरूलाई २‍.४ अर्ब युरो क्षतिपूर्ति दिने जर्मनीको घोषणा
लागुऔषध ओसारपसारमा बालबालिका प्रयोग, १३ वर्षका बालक पक्राउ
नेपाल ब्रिअरी कम्पनीको हाताभित्र भीषण आगलागी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ३ कर्मचारीमाथि पाँच हजार घुस मागेकाे अभियाेग
सर्वोच्चले नेकपा पार्टी आधिकारिताको निर्णय आइतबार सुनाउने
नारायणगढ-मुग्लिङ सडक साढे ४ घण्टा बन्द हुने
हङ्कङको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने चीनको घोषणा
बौद्धिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रको माग गर्दै र्‍याली
महिला हिंसा जन्य अपराधलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ : मन्त्री महतो
सोति घटना : दलित अगुवाहरुद्वारा राजधानीमा प्रदर्शन
रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालनमा
कस्तो रहला शुक्रबार दिनभरको मौसम ?
ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथका ९९ वर्षका पतिको मुटुको सफल शल्यक्रिया
बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल ओली नेतृत्वमै चल्छः पौडेल
काठमाडौं, २१ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री...
सहिद परिवारलाई भेटेर काठमाडौं छिर्दै विप्लव
काठमाडौं, २१ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव शुक्रबार बिहान काठमाडौं छिर्दै छन्...
राष्ट्रिय सभागृहबाट ओली र विप्लवको संयुक्त सम्बोधन, हेर्नुहोस् लाइभ
काठमाडाैं, २१ फागुन । नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच बिहिबार भएको सहमतिपत्रमा...
काठमाडौं, २१ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका नेता वामदेव गौतम निवास पुगेका छन् । नेकपा ओली पक्षका अध्यक्ष समेत...
काठमाडौं, २१ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले विभिन्न चार निर्णय लिएको छ । कांग्रेस प्रमुख...
यस्तो छ निर्वाचन आयोगलाई प्रचण्ड-माधव समूहको पत्र
काठमाडाैं, २१ फागुन । नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको विवाद अविलम्ब निरुपण गर्न अनुरोध गर्दे...
लगातार घट्ने क्रममा सुनको मूल्य, प्रतितोला कतिमा झर्‍यो ?
काठमाडौं, २१ फागुन । शुक्रबार सुनको मूल्यमा ९०० रुपैयाँले गिरावट आएको छ। बिहीबार ८६ हजार ५०० मा कारोबार भएको सुन शुक्रबार...
विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ प्रक्रिया शुरु
काठमाडौं, २१ फागुन । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द समूहका गतिविधिमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेसँगै नेता–कार्यकर्ता रिहाइ प्रक्रिया...